Izindaba - Izingxenye ezimbili ezinkulu zikalayini wokukhiqiza ongaphothi we-spunbond
Kulezi zinsuku, ukusetshenziswa kwezindwangu zokulingisa ezingasuki ezilukiwe kusesejwayelekile. Ngaphezu kwezingubo esivame ukugqoka, izindwangu ezingalukiwe ezisontwe nazo ziyadingeka kumaski athandwayo. Imakethe enkulu yezindwangu ezingezona ezelukiwe ze-spunbond iphinde inikeze umugqa omkhulu wokukhiqiza wendwangu ongalukanga osebenzisa kakhulu. Ngemuva kokusebenzisa ulayini wokukhiqiza wendwangu ongalukwanga we-spunbond imishini yokukhiqiza okuzenzakalelayo okunesivinini esikhulu, abantu bangakhiqiza ngobuningi. Izindwangu eziningi ze-spunbond ezingalukiwe zikhiqizwa ukuhlangabezana nezidingo zemakethe. Ulayini wokukhiqiza wendwangu ongalukwanga we-spunbond uyinkimbinkimbi kakhulu kepha ihlakaniphile imishini yokulungisa imishini. Ngezansi, umhleli uzokukhombisa izingxenye ezimbili ezinkulu zomugqa wokukhiqiza ongavukiwe we-spunbond ngokuningiliziwe.
Izingxenye ezimbili ezingenhla zakha umugqa wokukhiqiza wendwangu ongavukiwe ohlanganisa i-spunbond, enikeza isiqinisekiso esinamandla nesinokwethenjelwa sehardware sokukhiqizwa kwezindwangu ze-spunbond ezingezona ezilukiwe. Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe bokukhiqiza, izintambo eziningi zokukhiqiza ezingavukiwe ze-spunbond seziqale ukwehlisa amanani futhi zaziwa, futhi abakhiqizi abaningi sebeqalile ukubazisa. Isethi yonke yemishini enikezwe ngumkhiqizi wolayini wethu wokukhiqiza ongasuki we-spunbond ungokuqukethwe okuphezulu kwezobuchwepheshe, intengo yesayensi, nekhwalithi enhle kakhulu, ezoqinisekisa ukuthi uzokwaneliseka ngokusebenzisa kwakho. Uma unesifiso semishini yethu, sicela ukhululeke ukuvakashela imboni yethu.
Amathegi ashisayo, Hot Products, Ibalazwe Amagama angukhiye A, Amagama angukhiye B, amagama okuhlola,